Isiko Zinus Slumber 1 Umkhiqizi | Rayson
Ukuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle okukhiqiza, kanye nensizakalo ephelele, iRayson ihola embonini manje futhi isakaza iRayson yethu emhlabeni wonke. Ngokubambisana nemikhiqizo yethu, izinsizakalo zethu nazo zinikezwa njengezinga eliphakeme kakhulu. UZinus Slumber 1 Unikele kakhulu ekuthuthukisweni komkhiqizo kanye nokuthuthukiswa kwekhwalithi yensizakalo, sesisungule idumela eliphakeme ezimakethe. Sithembisa ukuhlinzeka wonke amakhasimende emhlabeni wonke ngensizakalo esheshayo nezobuchwepheshe emboza ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa, nangemva kokuthengisa. Akunandaba ukuthi ukuphi noma yiliphi ibhizinisi olibandakanyekile kulo, sithanda ukukusiza ubhekane nanoma yiluphi udaba. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngomkhiqizo wethu omusha we-Zinus Slumber 1 noma inkampani yethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.rayson zinus slamber 1 uhlolwe ngokuhlola okuhlukahlukene kanye nokuhlolisisa. Ukunemba kwe-hangtag nelebuli, ukulimala kokusebenza, kanye nekhwalithi yokuqinisekisa yengxenye izohlolwa ngendlela eqinile.